အရမ်းရှက်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ ဒီသရုပ်ဆောင်အလုပ်ကို ဖြစ်မယ်လို့ လုံးဝမထင်ထားဘူးဆိုတဲ့ ချောရတနာ
Category: စတားများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း	Published: 03 April 2012	Q. မချောငယ်ငယ်က အနုပညာအလုပ်မဟုတ်ဘဲ တခြားဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့အလုပ်ရှိလား။ A. ငယ်ငယ်တုန်းက လေယာဉ်မယ်လည်း ဖြစ်ချင်တာပဲ။ ဆရာမလည်း ဖြစ်ချင်တာပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဆရာမအင်္ကျီလးတွေ့ရင်လည်း အဲဒီလိုမျိုးကျောင်းစိမ်း အဖြူ၊ အစိမ်းလေးတွေဝတ်တာကို ကြိုက်တယ်။ နောက်ပြီး လေယာဉ်မယ်ကိုကျတော့လည်း တစ်မျိုးကြိုက်ပြန်ရော။
Read more...	ကျောင်းဆရာမလည်း ဖြစ်ချင်တယ် ဆရာဝန်လည်း ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
Category: စတားများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း	Published: 01 April 2012	Q. သင်ဇာဆယ်ကျော်သက်အရွယ်က စိတ်ကူးခဲ့တဲ့ အိပ်မက်က ဘာလဲ။ A. ငယ်ငယ်ကတော့ ပန်းချီဆွဲဖြစ်တာ ဝါသနာပါတော့ ပန်းချီဆရာမ ဖြစ်ချင်တယ်။ ကျောင်းဆရာမလည်း ဖြစ်ချင်တယ်။ ဆရာဝန်လည်း ဖြစ်ချင်တယ်။ အစုံပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဖြစ်ချင်ဆုံးကတော့ ဆရာဝန်ပဲ။
Read more...	ကိုယ်ဖြစ်စေချင်တာထက် သူဖြစ်ချင်တာကို အားပေးလိုက်ရင် ပိုပြီးထူးချွန်တဲ့လူဖြစ်လာမှာပါဆိုတဲ့ မင်းဦး
Category: စတားများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း	Published: 30 March 2012	Q. ငယ်ငယ်တုန်းက ဒီအနုပညာအလုပ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်ကဘာလဲ။ A. ကိုယ်က အင်ဂျီနီယာကို နဂိုကတည်းက ဝါသနာပါတာ။ ဟိုး ငယ်ငယ်လေးတုန်းက အဓိက ဖြစ်ချင်တာ ပိုင်းလော့ပေါ့။ ဒီပိုင်းလော့က ဘယ်လိုကနေဘယ်လို သွားရမယ်ဆိုတာ ကိုယ်မဖြစ်နိုင်မှန်းသိတော့ အင်ဂျီနီယာဖြစ်အောင် ကြိုးစားခဲ့တာပေါ့နော်။
Read more...	အောင်မြင်ကျော်ကြား အနုပညာရှင်များရဲ့ လျှို့ဝှက်စကား ခိုင်လေး(URANIUM)
Category: စတားများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း	Published: 28 March 2012	မေး - သူငယ်ချင်းတွေပေးထားတဲ့ လျှို့ဝှက်နာမည် ဖြေ - RP2 (Hee Hee) ငပေါလို့ ပြောတာ။
မေး - ကိုယ်ချစ်တဲ့ တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို ပေးထားတဲ့ လျှို့ဝှက်နာမည်ဖြေ - Eek…တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို ချစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အိမ်မှာမမွေးဘူး။
Read more...	ဆယ်တန်းနှစ်မှာ အဖေဆုံးပါးသွားခဲ့တော့ မိုးပြည့်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်လဲ ပြောင်းလဲသွားခဲ့တာ မိုးပြည့်ပြည့်မောင်
Category: စတားများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း	Published: 26 March 2012	Q. မမိုးပြည့် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်က စိတ်ကူးခဲ့တဲ့ အိမ်မက်ကဘာလဲ။ A. ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်၊ ဆယ်တန်းလောက်ကဖြစ်ချင်တဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်က အင်ဂျင်နီယာ အရမ်းဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်။
Q. မမိုးပြည့်ကိုမိဘတွေက ချုပ်ချယ်တားမြစ်ခဲ့တာရော ရှိလား။ A. မိဘတွေကတော့ မိုးပြည့်လုပ်ချင်တာကို လုပ်ခွင့်ပေးတယ်။ အဘိုး၊ အဘွားတွေနဲ့ နေခဲ့ရတော့ ဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိ နေခဲ့ရတယ်။ သွားမယ်လာမယ် ဆိုရင်လည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် မသွားခဲ့ရဘူး။
Read more...	ပရိသတ်တွေက ကိုယ့်ကိုရယ်ပြရင် ဂျူးဂျူးလေ အရမ်းကိုပျော်တာ အရမ်းလဲစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့ပြောတဲ့ ဂျူးဂျူးကေ
ကလေးတွေကို ကြိမ်လုံးတစ်ချောင်းနဲ့ စာသင်ချင်တယ် ဆရာလုပ်ချင်တာ ပွင့်နဒီမောင် ဖြစ်ချင်ပြီဆိုရင် လုပ်ကိုလုပ်ရမှဆိုတဲ့ ချစ်သုဝေ
အောင်မြင်ကျော်ကြား အနုပညာရှင်များရဲ့ လျှို့ဝှက် စကား မိစန္ဒီ
ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ သေချာပြီဆိုရင် ဘယ်သူကြိုက်ကြိုက် မကြိုက်ကြိုက် မကြောက်တော့ဘူးလို့ ပြောတဲ့ လူမင်း
Start Prev345678910 11 12 Next End Page 8 of 79